Maxaa sabab u ah korarka dilalka qorsheysan ee ka dhaca Muqdisho? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaa sabab u ah korarka dilalka qorsheysan ee ka dhaca Muqdisho?
Maxaa sabab u ah korarka dilalka qorsheysan ee ka dhaca Muqdisho?
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay Dilalka qorsheysan ee ka dhaca Magaalada Muqdisho, waxaana Sarkaal xog hoose usoo gudbiyay Wakaalada Warqaad.com uu sheegay sababta ka dambeysa Falalkaasi amni daro.
Ururka Al Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in Magaalada Muqdisho ay soo galiyeen ciidamo amniyaad ah, kuwaasi oo gaysanaya dilalka qorsheysan iyo beegsiga Shaqsiyaadka dowladda ka tirsan.
Dhalinyarada Shabaab u shaqeysay ayaa u suurageli wayday inay sameeyaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka oo ay ka sameeyaan Magaalada Muqdisho, maadaama ciidamada ammaanka ay kordhiyeen koontaroolada gaadiidka lagu baaro ee Magaalada gudaheeda.
Saraakiil ka tirsan Hay’adda Sirdoonka dowladda ayaa sheegay inay heleen macluumaad ku saabsan in Shabaab ay Muqdisho soo galiyeen dhalinyaro loo soo tababaray dilalka qorsheysan.
Sidoo kalena waxaa la helay xog ku saabsan in Gawaari Qaraxyo ku jiraan oo la doonayo in lagu bartilmaameedsado xarumo muhiim ah lasoo galiyay Magaalada Muqdisho, iyadoo feejignaan la galiyay ciidamada amaanka oo baaritaano qarsoon ka wada magaalada Muqdisho.
NISA ayaa sidoo kale ka war heshay in Saraakiil ka tirsan Amniyaadka Al shabaab ay ku dhuumaaleysayaan qeybo ka mid ah magaalada, iyadoo la sheegay in ay ka soo carareen Gobolada Dalka oo Duqeymaha ay ka geystaan Diyaaradaha Mareykanka ay kordheen.